ဒူဒူကြီး: October 2011
အီရတ်၊ အီရန်၊ အမေရိကန်၊ စက်ာပူနဲ့ IED အဖြစ်သုံးတဲ့ RF modules တွေ
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် မှာ၊ ဦးရီးထွန်း ရေးခဲ့တဲ့ Post ဖြစ်ပြီး၊ Logistics & Supply Chain Management နဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်မိလို့၊ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
အီရတ်မှာဖြစ်ပွာခဲ့တဲ့ roadside booming လမ်းဘေးဗုံးကွဲမှုတွေကို၊ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ အများစုဖြစ်တဲ့ (၆၀ %) ကျော်ဟာ IED improvised explosive device အဖြစ်၊ wireless data transmitted radio frequency modules တွေကို၊ detonator အနေနဲ့အသုံးပြုပြီး၊ ခွဲသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ roadside booming ကြောင့် အမေရိကန်စစ်သားတွ၊ ထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ wireless data transmitted RF modules တွေကိုထုတ်လုပ်သူကတော့ Minnesota မှ၊ Digi International ဆိုတဲ့ US အခြေစိုက်၊ ကုမ္မဏီတခု ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
စက်ာပူက တဆင့်တင်သွင်းတယ်လို့ ယူဆရတာကြောင့်၊ အစတွေဆွဲထုတ်တဲ့အခါ စက်ာပူ Peninsular Plaza ပင်နဆူလာပလာဇာမှ၊ Opto Electronics ဆိုတဲ့ အီရန်နိုင်ငံသား Hossein Larijani ပိုင် အီလက် ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေလက်ကားဖြန့်တဲ့၊ ကုမ္မဏီ၊ စက်ာပူ Kallang Way မှ၊ NEL Electronics ဆိုတဲ့၊ စက်ာပူနိုင်ငံသား Lim Yong Nam ပိုင် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေလက်ကားဖြန့်တဲ့၊ ကုမ္မဏီ၊ စက်ာပူ Simei condominium မှ စက်ာပူနိုင်ငံသား Lim Kow Seng နဲ့ Benson Hia တို့ရဲ့ Corezing International ဆိုတဲ့ ကုမ္မဏီတွေ ပါဝင်ပက်သက်နေတာကို၊ DOJ ဆိုတဲ့ US Department of Justice က၊ တွေ့သွားပါတယ်။
Opto Electronics ကိုယ်စား၊ Lim Yong Nam က IED တွေကိုစုံစမ်းပါတယ်။ ပေါက်ဈေးတခုကို US$ 98.45 အစား၊ US $ 60 နဲ့ရမလားလို့ Digi International ကိုမေးပါတယ်။ တခါ Lim Yong Nam ကပဲ၊ NEL Electronics နဲ့ Corezing International ကိုယ်စား၊ တခုကို US$ 77 နှုံးနဲ့ အခု ၆၀၀၀ ဝယ်ခဲ့ပါ တယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ wireless data transmitted radio frequency ဆိုင်ရာ၊ သုသေသန လုပ်ဖို့ပါတဲ့။ တခါရလာတဲ့ IED တွေကို၊ တခု US$ 85 နှုံးနဲ့ Opto Electronics ကို ပြန်ရောင်းပါတယ်။
ပစ္စည်းတွေကို NEL Electronics အနေနဲ့၊ စက်ာပူကိုသွင်းပြီးမှ၊ Corezing International အနေနဲ့ အီရန်ကို ပို့ပါသတဲ့။ အဲဒီကတဆင့် အီရတ်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ာပူနိုင်ငံသား (၄) ဦး ကိုတော့ စတင် စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်သလို၊ ဥပဒေအရ US Department of Justice ကိုလွှဲပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ အီရန်နိုင်ငံ သား Hossein Larijani ကိုတော့ မမိသေးပါဘူးတဲ့။
Reference : The Straits Times, Friday, October 28, 2011
Credit to : ဦးရီးထွန်း
Posted by ဒူဒူကြီး at 05:14 No comments:
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မှာ (၂၀၁၀) ခုနှစ်က၊ ဦးရီးထွန်း ရေးခဲ့တဲ့ Post ဖြစ်ပြီး၊ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြ ပါတယ်။
အခုတလော Logistics & Supply Chain Management ဘာသာရပ်အကြောင်းတွေးမိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်က၊ ညီငယ်၊ ညီမငယ်တွေထဲမှာ၊ အဲဒီဘာသာရပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ Specialized လုပ်ကာ၊ Professional အဆင့်လေ့လာသင်ယူပြီး၊ သင်ယူဆဲ၊ ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလည်းကိုလည်း၊ တဆက်တည်းတွေးမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင် Logistics တို့၊ Supply Chain တို့က၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က ဖွင့်လှစ် ပို့ချပေးနေတဲ့ ဘာသာရပ်တွေထဲမှာ၊ ဘာသာခွဲတခုအနေနဲ့ပါဝင်ပြီး၊ သီးသန့် Specialized လုပ်ကာ၊ Diploma Level လောက်အထိ၊ မသင်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မသိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မကြာခင်မှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆင့်ကနေ၊ ကူးပြောင်းရတော့မှာပါ။ ကူးပြောင်းတဲ့အခါ Infrastructure ဆိုတဲ့၊ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကို၊ Government Sector ကနေ၊ အစအဆုံး တာဝန်ယူ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုတာ၊ မလွယ်ပါဘူး။ Production, Manufacturing အဆင့်ကိုမရောက်ခင် Infrastructure တွေကို၊ အလုံးအရင်းနဲ့ တည်ဆောက်တဲ့အခါ၊ FDI - Foreign Direct Investment ဆိုတဲ့၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေကို၊ မှီခိုရမှာပါ။
Infrastructure တွေတည်ဆောက်တဲ့ပြီး၊ Production တွေ၊ Manufacturing တွေ၊ Import တွေ၊ Export တွေလုပ်တဲ့အခါ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့ Engineer တွေ၊ IT ပညာရှင်တွေ၊ စာရင်းအင်းနဲ့ စာရင်းကိုင်ပညာရှင်တွေ၊ ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်တွေ၊ အထိုက်အလျှောက်၊ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Logistics & Supply Chain Management ဘာသာရပ်ကို Specialized လုပ်လာတဲ့ ပညာရှင်တွေ သိပ်မရှိသေး ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိ၊ FDI နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ Company တွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ၊ Purchasing သို့မဟုတ် Procurement နဲ့၊ ပက်သက်တဲ့ Senior Post တွေမှာ၊ နိုင်ငံခြားသားအများစု တာဝန်ယူထား တာတွေ့ရပါတယ်။ တခါက၊ FDI နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ Company တချို့မှ၊ Executive & Management level Staff တချို့နဲ့ဆုံလို့၊ Purchasing သို့မဟုတ် Procurement နဲ့၊ ပက်သက်တဲ့ Senior Post တွေမှာ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေဘာလို့ခန့်ထားတာလည်းလို့မေးတဲ့အခါ၊ မြန်မာပြည်မှာ၊ Logistics & Supply Chain Management ဘာသာရပ်ကို၊ စနစ်တကျသင်ယူတတ်မြောက်ထားတဲ့သူတွေမရှိ လို့ပါ... လို့ဖြေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာတွေအနေနဲ့က Purchaser ကို၊ အဝယ်တော် အဆင့်လောက်ပဲမြင်တတ်ပြီး၊ Procurement Engineer အဆင့်အထိ မမြင်တတ်တာလည်းပါ ပါတယ်။
Mineral Resources ဆိုတဲ့၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေက၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါ၊ ကုန်ခမ်းသွားမှာပါ။ Geo-politicsအရ၊ Buffer ကြားခံနိုင်ငံတခု၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဖွံဖြိုးမှုနောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ၊ တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးပြသနာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကြားမှ၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ Logistics & Supply Chain Management ဘာသာရပ်ကို၊ စနစ်တကျ အသုံးချ တတ်မယ်ဆိုရင်၊ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအဆင့်ကို၊ ကူးပြောင်းသွားမှာပါ။
တခါက ဆရာကြီး William Paul က၊ လွယ်လွယ်လုပ်လို့ရတာတွေ လွယ်လွယ်လုပ်ကြပါစေ...လို့ ပြောခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဆရာကြီးက (၁၉၅၀) ခုနှစ် များဆီက Harvard ဟားဗတ် MBA ပါ။
Posted by ဒူဒူကြီး at 04:59 No comments:
အင်းစိန်G.T.I အကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့လိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါ၊ အချက်အလက်တော်တော်များများ ရလာ ပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ၊ (၁၂)ကြိမ်မြောက် ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲအမှတ်တရ "ဂျီတီအိုင် ပုံရိပ်သမိုင်းမှတ်တမ်းများ" စာအုပ်မှတဆင့်၊ ကူးယူဖော်ပြတာဖြစ်ပြီး၊ မှတ်တမ်းရေးသားခဲ့သူတွေနဲ့ စီစဉ်ထုတ်ဝေသူတွေ အားလုံးကို၊ ကျေးဇူးအထူး တင်မိပါတယ်။
(၁၈၉၅) ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှာ၊ "Government Engineering School" အဖြစ်၊ ယခုခေါတ်လိပ်စာအရ၊ ခြံအမှတ် (၂၉၇) မြို့မကျောင်းလမ်း၊ လသာမြို့နယ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာ "Mr. Brown" ဖြစ်ကာ၊ သင်တန်းကာလက (၃) နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ဖွင့်လှစ်စဉ်က ကျောင်းသားအရည် အတွက်၊ အလွန် နည်းပါးပြီး၊ မြန်မာလူမျိုးကျောင်းသားအဖြစ် " မောင်မြ" ဆိုတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
မောင်မြ ဆိုတာကတော့၊ (၁၈၇၉) မတ်လ (၁၉) ရက်နေ့မှာ၊ လေးမျက်နှာမြို့မှာ ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၇၃) ခုနှစ် မန္တလေးမြို့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ " ကျောက်စာဝန် ဦးမြ" ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုး အင်ဂျင်နီယာဟာ " ကျောက်စာဝန် ဦးမြ" ရယ်လို့၊ ယူဆလို့ရသလို၊ ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုး အင်ဂျင်နီယာ ကို နောင်မှာ "အင်းစိန် GTI" ဖြစ်လာမယ့် Government Engineering School မှ၊ မွေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဦးမြဟာ (၁၉၀၂) ခုနှစ် မှ (၁၉၀၆) ခုနှစ်အထိ Government Engineering School မှာ ဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ ပါတယ်။ (၁၈၉၈) မှာ မူလနေရာကနေ၊ အင်းစိန်ဘူတာအရှေ့ဘက်၊ (ယခင်) တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်ဆေးကုသရေး တက္ကသိုလ်၊ (ယခု) တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ဆေးကုသရေး ညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနရုံးချုပ် နေရာကီု၊ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာ လူမျိုးကျောင်းသား အတော်အတန်ရှိလာပြီမို့၊ မြန်မာလူမျိုး ကျောင်းသားများအတွက် သီးသန့်အဆောင် ကိုပါ၊ ထည့်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းရွှေ့စဉ်က ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာ "Mr. F.H.O Connor Mitchell" ဖြစ်ပြီး၊ ဦးမြ ဟာဆရာအဖြစ် ဆက်လက်အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၀၆) စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှာ၊ ဆရာဦးမြဟာ ကမ္ပည်းကျောက်စာ ဌာန ကို ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အတွက်၊ မြန်မာလူမျိုး ဆရာအဖြစ် "ဆရာဦးလူအေး" အစားထိုးဝင်ရောက်လာ ပါတယ်။ ဆရာဦးလူအေးဟာ (၁၉၅၁) မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ အထိ (၄၅) နှစ်တိတိ အမှုထမ်းခဲ့ပြီး၊ (၁၉၅၉) ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
အင်းစိန်ရွာမကို၊ (၁၉၀၈) ခုနှစ်မှာ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး Mr. F.H.O Connor Mitchell ကပင် ဦးဆောင်ပြောင်းရွှေ့ပြီး၊ "Government School of Engineering & Technical High School" လို့ အမည် ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အီလက်ထရောနစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းသားတွေ၊ တက်ခဲ့တဲ့ Main Building ဟာ (၁၉၀၈) ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းက၊ ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ (၁၉၀၈) ခုနှစ်မှာ "ဗဟိုဆောင် - Main Hostel" ကို စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျန် အဆောက်အဦးတွေကို (၁၉၂၂) ခုနှစ်ကျမှဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အင်းစိန်G.T.I ရဲ့ မူလ အဆောက်အဦးတွေဟာ၊ ဝိတိုရိယခေါါတ်ပိသုကာလက်ရာများဖြစ်ပါတယ်။ Main Building မှာ၊ စာသင်ခန်း (၆) ခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ ပုံဆွဲခန်း၊ ရုံးခန်း၊ ဓါတ်ခွဲခန်း၊ စာကြည့်ခန်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းတို့ ပါဝင်ပြီး၊ ကျောင်းဆောင်အလယ်မှာ စတုရန်းပုံ မြေကွက်ငယ်ကို ချန်လှပ်ထားရှိပါတယ်။
(၁၉၁၂) ခုနှစ်မှာ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး "Mr. A.P Morris" ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ယူပြီး၊ "Government Technical Institute (GTI)" ရယ်လို့ပြောင်းလဲအမည်သတ်မှတ်ကာ၊ ပညာသင်ကြားသူ ကျောင်းသားအရည်အတွက် တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီး Mr. A.P Morris ကို၊ အများဆုံးအကူအညီပေးခဲ့သူက ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ပြောင်းလာတဲ့၊ သချာ်ကထိက "Mr. P.P Annantanaraya Aiyar" ဖြစ်ပြီး၊ ဆရာအိုင်ယာဟာ Member of the Society of West Virginia Collegiate ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉၂၆) ခုနှစ်မှာ Winners of the Morris Medal ဆုကို စတင်ချီးမြင့်ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၃၈) ခုနှစ်အထိ ပညာထူးချွန်သူ၊ ကျောင်းသားများ ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး မြန်မာလူမျိုး ကျောင်းအုပ်ကြီးကတော့ "Mr. T Ba Hli (ဆရာကြီးဦးဘလှီ) M.Sc (London), DIC (Diploma of the Imerial Collage), B.E (Civil, Culcutta University)" ဖြစ်ပြီး၊ (၁၉၃၆) ခုနှစ်မှ၊ (၁၉၅၀) ခုနှစ်အထိ တာဝန် ယူခဲ့ကာ၊ (၁၉၅၀) မှ (၁၉၅၅) အထိ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် မဟာ ဌာနမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး၊ (၁၉၇၆) အသက် (၈၀) ကျော်အရွယ်မှာ၊ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဘလှီ လက်ထက်မှာ၊ မြန်မာလူမျိုးကျောင်းသားများ၊ စားသောက်မှု အဆင်ပြေစေဖို့၊ Main Burmese Mess ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၄၁) BBA4th Division အမှတ်ပေး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ၊ နာမည်ကြီးဘောလုံးအသင်းများဖြစ်တဲ့ Customs အသင်း၊ ပုလိပ်ကြီးအသင်း၊ မြူနီစပယ်အသင်း၊ ရန်ကုန်ကောလိပ်၊ ဖရန့်ယူနီယံအသင်း၊ မြို့မ၊ သံလျှင်ကလပ်၊ ဂျင်မခါနာကလပ် စတဲ့၊ အသင်းတွေနဲ့အတူ၊ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ၊ အင်းစိန် GTI အသင်းက၊ ပထမဆု ရခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း၊ (၁၉၄၁) ဒီဇင်ဘာလမှာ၊ ဂျပန်စစ်တပ်မှ မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အခါ၊ အင်းစိန် GTI ရဲ့၊ ပညာသင်ကြားမှုများလည်းရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၄၄) စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့မှာ၊ ဂျပန် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်ခံ အစိုးရမှ၊ "State Technical Institute" အမည်နဲ့၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အတွင်းမှာ၊ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၄၅) ဧပြီလ မတိုင်ခင်မှာ၊ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ ပါတယ်။
ဂျပန်စစ်တပ်မှ မြန်မာပြည်ကို၊ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလမှာ မူလအင်းစိန် G.T.I ရဲ့ Main Building နဲ့ Main Hostel ကို၊ ဆေးရုံအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ရင်ခွဲရုံ Mortuary အနေနဲ့၊ Main Hostel ဗဟိုဆောင် အဆောက် အဦရဲ့ အစိတ်အပိုင်း၊ တချို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်တို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ၊ အမှတ် (၆) ချာချီလမ်း (ယခု ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်း) မှာ၊ ဗမာ နိုင်ငံတော် အစိုးရစက်မှုလက်မှုပညာသင်ကျောင်း အမည်နဲ့၊ (၁၉၄၅) ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်နေ့တွင်၊ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးကာ၊ ကျောင်းသားသစ်များ လက်ခံခဲ့ပါ တယ်။ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားတဲ့၊ အဂ်လိပ်ဘာသာ သို့မဟုတ် အဂ်လိပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာ ဒဿမတန်းအထိ တက်ရောက်သင်ကြားဖူးသူ များကို ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအဖြစ်၊ ဂဏန်းသခ်ျာ၊ အက္ခရာသခ်ျာ၊ ဂဲသြမေတြီနှင့် ပုံကြမ်းဆွဲ ဘာသာရပ်များကို၊ သြဂုတ်လ (၂၄) ရက်နေ့ (၁၉၄၅) ခုနှစ်မှာ၊ စစ်ဆေးခဲ့ ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ (၁၉၄၅) ခုနှစ် မှာ၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်အာင်မြင်လာသူတွေကို၊ Road & Building လမ်းပန်းအဆောက်အဦသင်တန်းနှင့် Mechanical Engineering စက်မှုအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း (၂) မျိုးမှာ၊ စတင်လက်ခံကာ ပို့ချပေးခဲ့ပြီး၊ တိုင်းပြည်အခြေအနေအေးချမ်း တည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါ၊ မူလ အင်းစိန် GTI ကျောင်းနေရာသို့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ကာ၊ ဆက်လက် ပို့ချခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် "ဆရာကြီးဦးဘလှီ" ကတာဝန်ယူခဲ့ပြီး၊ "ဆရာကြီးဦးလူအေး" နှင့် "ဆရာကြီးဦးထင်စိန်" တို့အပါအဝင်၊ အခြား လက်ထောက်ဆရာများဖြင့် ကျောင်းသား (၃၀) ခန့်ကို သင်ကြားပို့ချ ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုများကြောင့် ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်နေ့မှာ၊ မူလ အင်းစိန် GTI ကျောင်းနေရာမှ၊ ဒဂုံမြို့နယ် မော်ကွန်းတိုက်လမ်းနှင့် ပန်တျာလမ်းကြား၊ ဦးဝိစာရလမ်းမပေါါမှာရှိတဲ့၊ ဂူဂျရတ္တီကျောင်းနေရာ ကို၊ ဆရာကြီးဦးဘလှီမှပင်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူကာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂူဂျရတ္တီကျောင်းကို၊ စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့ ၁၉၃၉ ခုနှစ် မှာ၊ အိန္နိယဝန်ကြီးချုပ် Mr. ပဏ္တွစ်နေရူး မှ၊ အုတ်မြစ်ချကာ ဂူဂျာရပ်ပြည်နယ်က ဂူဂျရတ္တီလူမျိုး ကျောင်းသားများအတွက်၊ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုများ ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အခါ၊ Main Building ပင်မဆောင်တခြမ်း မီးရှို့ဖျက်စီး ခံထားရတဲ့၊ မူလအင်းစိန် GTI ကျောင်းနေရာမှာ၊ "ECEC (Emergency Civil Engineering Course)" သင်တန်းအမည်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၁) ရက်၊ (၁၉၄၈) ခုနှစ် မှစပြီး၊ သြဂုတ်လ (၈) ရက် (၁၉၅၂) ခုနှစ် အထိ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ဆရာကြီး ဦးဘရှင်မှ တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက် (၁၉၅၀) ခုနှစ်မှာ၊ စတင်ခဲ့တဲ့၊ ဓနဿဟာရနိုင်ငံများထံမှ၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန်း အထောက်အပံ့ကို၊ အင်းစိန် GTI ကျောင်းမှ၊ အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီး "ဆရာကြီးဦးဘရှင်" မှတဆင့်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်၊ အင်းစိန် GTI ဆင်း မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန ကထိက "ဆရာကြီးဦးအန့်ခင်" က တာဝန်ယူခဲ့ပြီး၊ သြဂုတ်လ (၈) ရက် (၁၉၅၂) ခုနှစ်ကနေ၊ ဇူလိုင်လ (၂၀) ရက် (၁၉၅၃) ခုနှစ်အထိ တာဝန်ယူချိန် အချိန်တစ်နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း၊ (၁၉၅၂ - ၅၃) ပညာသင်နှစ်မှာ၊ Electronics & Communications အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ AMI, MECE, AMICE, AMIEE လက်မှတ်များရရှိထားသူ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်ဇာတိဖြစ်တဲ့၊ "ဆရာကြီးဦးမောင်ကြီး"မှ၊ ဇူလိုင်လ (၂၀) ရက် (၁၉၅၃) ခုနှစ်မှ၊ သြဂုတ်လ (၂) ရက် (၁၉၅၄) ခုနှစ် အထိ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ NASA National Aeronautics and Space Administration အဖွဲ့မှာ၊ ဆရာကြီးဦးမောင်ကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင် ဖို့၊ ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အခါ၊ ဆရာကြီးဦးအန့်ခင်မှ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ပြန်လည်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။
ယခင်က GTI ကျောင်းဆင်းလက်မှတ်ကိုသာ၊ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ "A.G.T.I (Associateship of the Government Technical Institute)" အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို၊ ဆရာကြီးဦးအန့်ခင်လက်ထက်၊ (၁၉၅၄) ခုနှစ်မှ၊ စကာ ပေးအပ်ခဲ့သလို၊ (၁၉၅၅) ခုနှစ်မှာ သုံးထပ်မှန်ဆောင်၊ ဒက္ခိဏနဲ့ ဥတ္တရဆောင် များကိုလည်း၊ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Ford Foundation အကူအညီအရစေလွှတ်ခဲ့တဲ့၊ "William Hood Dunwoddy Industrial Institute of Minneapolis USA" မှ၊ Mr. Young, Mr. Allan L.Johnson, Mr. Mannaris နဲ့ Mr. Van Wyck တို့မှ Adviser အဖြစ်၊ (၁၉၅၃) ခုနစ်မှ (၁၉၆၂) ခုနှစ်အထိ၊ အင်းစိန် G.T.I မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ Mr. Van Wyck ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ၊ Mr. Jhon J. Duggan မှ၊ Chief Adviser အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၅၅) ခုနစ်မှာ ပထမဆုံး အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာသင်တန်းမှ၊ ကျောင်းသား (၃) ဦးဖြစ်တဲ့၊ ဆရာကြီးဦးသန်းမောင် (အင်းစိန် G.T.I အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း ဌာနမှူး)၊ ဦးတင်အေး (အမှုဆောင်အင်ဂျင်နီယာ၊ မြန်မာ့အသံ) နဲ့ ဆရာကြီး ဦးထွန်းခင် (အလုပ်ရုံမှူး၊ စက်မှူလက်မှု အထက်တန်းကျောင်း၊ မော်လမြိုင်) တို့၊ သင်တန်းဆင်းလာကြ ပါတယ်။ (၁၉၅၆) ခုနစ်မှာ လျှပ်စစ်(စွမ်းအား) အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းမှ ပထမဆုရ အောင်မြင်ခဲ့သူ ဆရာကြီးဦးလှဝင်း (လက်ထောက်ကထိက၊ အင်းစိန် G.T.I လျှပ်စစ်(စွမ်းအား) အင်ဂျင်နီယာဌာန)၊ (၁၉၅၇) ခုနစ်မှာ လျှပ်စစ်(စွမ်းအား) အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းမှ၊ တတိယဆုရ အောင်မြင်ခဲ့သူ ဆရာကြီး ဦးမျိုးဆွေ (ဌာနမှူး၊ အင်းစိန်G.T.I လျှပ်စစ်(စွမ်းအား) အင်ဂျင်နီယာဌာန)၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာသင်တန်းမှ ဒုတိယဆုရ အောင်မြင်ခဲ့သူဆရာကြီး Mr. T.R Guha (ဦးဂူဟား) (လက်ထောက်ကထိက၊ အင်းစိန်G.T.I အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး အင်ဂျင်နီယာဌာန) တို့၊ သင်တန်းဆင်းလာကြပါတယ်။
ဆရာကြီးဦးအန့်ခင်လက်ထက် အင်းစိန် G.T.I မှာ၊ ယခင်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့၊ ပုံဆွဲသင်တန်း (Draftsmanship သင်တန်း) မရှိတော့ပဲ၊ (၁၉၅၄) ခုနှစ်မှာ Mining Engineering သတ္တုတူးဖော်ရေးအင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းနှင့် (၁၉၅၅) ခုနှစ်မှာ၊ Mechanical (Machine Tools & Designs) စက်မှု(ပုံစံပြု) အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းတို့ကို၊ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၅၆) ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ ဆရာကြီးဦးအန့်ခင် အငြိမ်းစားယူတဲ့အတွက်၊ ဆရာကြီးဦးမြသန်းမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး အဖြစ်တာဝန် ယူခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၅၆) ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်မှာ အမျိုးသမီးအင်ဂျင်နီယာသင်တန်းသူ (၃) ဦးကို၊ စတင်ကျောင်းဝင်ခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၅၉) ခုနှစ်မှာ၊ ဆရာကြီးဦးမြသန်း အငြိမ်းစားယူတဲ့အခါ၊ B.O.C ကောလိပ်ဘွဲ့ရ၊ ဆရာကြီးဦးစိုးမောင် (B.Sc. Engg, ၁၉၅၅ ခုနှစ်) မှ၊ (၁၉၅၉) ခုနှစ်မှ (၁၉၇၂) ခုနှစ်အထိ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး၊ Aeronautical Engineering လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း ကိုစတင်သင်ကြားဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်ကြားမှုအထောက်အကူအဖြစ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သုံး Dakota လေယာဉ်ပျံတစ်စီး ကို၊ ကျောင်းဝင်းအတွင်း၊ ဥတ္တရဆောင်နဲ့ ဘောလုံးကွင်းအကြားမှာ၊ ထားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဆရာကြီးဦးစိုးမောင်ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်၊ (၁၉၅၉-၁၉၆၀) ပညာသင်နှစ်မှာ၊ ကင်မရွန်း နိုင်ငံသား (၁) ဦးနဲ့၊ လာအိုနိုင်ငံသား (၂) ဦး၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ကြပြီး၊ လာအိုနိုင်ငံသား (၂) ဦး၊ ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ လာအိုနိုင်ငံသားကျောင်းသား (၂) ဦး ဟာ၊ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့ကြ ပြီး၊ ကျောင်းမဆင်းခင်၊ အခြားနိုင်ငံ တစ်ခုမှာ၊ ဆက်လက်ပညာဆည်းပူးဖို့၊ ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ လာအို နိုင်ငံသားကျောင်းသား (၂) ဦးအနက်၊ တစ်ဦးရဲ့ နာမည်က၊ ခမန်း လို့ခေါါကြောင်း မှတ်တမ်းများ အရသိရပါတယ်။
GTI ဆင်း ပထမဆုံး အမျိုးသမီးအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ(Building) သင်တန်း မှ ဒေါါနော်မာဂရက် (အငြိမ်းစား၊ ခန့်မှန်း (၂)၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး) ဟာ၊ (၁၉၅၉) ခုနှစ် မှာ ကျောင်းဆင်းလာပြီး၊ (၁၉၆၀) ခုနှစ်မှာ၊ မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ(Building) သင်တန်း မှ၊ ဒေါါနော်စံကြည်ဖေ (အငြိမ်းစား၊ ခန့်မှန်းအုပ်၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး)၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းမှ၊ ဒေါါစန်းစန်းရီ နဲ့၊ ဒေါါနော်ဂျက်စီကချာ (Naw Jesse Kacher) တို့ ကျောင်းဆင်းခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၆၂) မတ်လမှာ၊ တော်လှန်ရေးအစိုးရတက်လာပြီး၊ အင်းစိန် G.T.I ကို၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကြီးကြပ်မှုမှ၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနကြီးကြပ်မှုသို့ပြောင်းလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၆၅) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်နေ့မှာ၊ အင်းစိန် G.T.I ကျောင်းသားဟောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် ဦးမျိုးမြင့် (နောင် တွင် သံအမတ်ကြီးဟောင်း)၊ စက်မှုလက်မှုပညာသင်ကြားရေးဝန် ဆရာကြီးဦးခင်မောင်၊ ကျောင်းအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းရီတို့၊ ကမကထလုပ်ကာ၊ ပထမဆုံးအကြိမ် A.G.T.I အောင် လက်မှတ်ပေးပွဲကို၊ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး အကြိမ် A.G.T.I အောင်လက်မှတ်ပေးပွဲအခမ်းအနားဟာ (၁၉၅၄) ခုနှစ်မှ၊ (၁၉၆၅) ခုနှစ် အတွင်း၊ သင်တန်းဆင်းခဲ့သူ (၁၀၇၂) ဦးတို့အတွက်၊ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ (၃၄၀) ဦး အခမ်းအနား တက်ရောက်ကာ၊ အောင်လက်မှတ်ရယူခဲ့သလို၊ အခမ်းအနားအတွက် ကုန်ကျစားရိတ်အားလုံး ကို၊ ကျောင်းသားထောက်ပံ့ငွေ Caution Money ထဲမှသာ၊ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
နတ်မောက်စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်းက၊ (၁၉၅၆) ခုနှစ် မေလ (၂၃) ရက်နေ့မှ စပြီး၊ (၃) နှစ် သင်တန်းအဖြစ်၊ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ETEC - Evening Technical Engineering Course ကို အတုယူကာ၊ (၁၉၆၉) မှာ၊ (၄) နှစ် တက်ရောက်သင်ယူရတဲ့ ညနေပိုင်း E.G.T.I - Evening Government Technical Institute သင်တန်းအဖြစ်၊ စတင်ဖွင်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းအုပ်ကြီး ဆရာကြီးဦးစိုးမောင်၊ (၁၉၇၂) ဇူလိုင်လမှာ၊ မန္တလေး GTI သို့၊ ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အခါ၊ ကလော GTI မှ ဆရာကြီးဦးအုန်းမောင်ပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးအုန်းမောင် လက်ထက် မှာ၊ ကျောင်းသူတွေအတွက်၊ သပြေဆောင်ကို စတင်ဆောက် လုပ်ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၇၇) မှာ၊ ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်သွင်က၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး အဖြစ်၊ ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် လအနည်းငယ်သာ၊ အမှုထမ်းဖြစ်ခဲ့သူ၊ ဆရာကြီး ဦးခင်မောင်သွင်နေရာမှာ၊ ဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွဟာ၊ ကထိကဌာနမှုးအဖြစ်မှ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး အဖြစ်၊ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေဟာ၊ (၁၉၆၀) ခုနှစ်၊ B.O.C ကောလိပ်မှ B.Sc. Engg; ဘွဲ့ရဖြစ်ပြီး၊ အင်းစိန် ဒိစတြိတ်ကောင်စီရုံးမှာ အင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့၊ (၆) နှစ်ခန့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီးမှ၊ သင်ကြားရေးကို ဝါသနာပါသူမို့၊ မန္တလေး GTI မှာ လက်ထောက်ကထိက အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေလက်ထက် (၁၉၇၇) နဲ့ (၁၉၇၈) မှာ၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန်းအရ၊ နိုင်ငံခြားမှ ဆရာများ၊ အင်းစိန် G.T.I မှာ၊ သင်တန်းများလာရောက်ပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီး ဦးမြင့်ဆွေဟာ၊ စက်မှုဆရာဖြစ်သင်ကျောင်း T.T.T.I - Technical Teachers' Training Institute ကိုလည်း၊ ဆရာကြီး ဦးလှမြင့် ကျောင်းအုပ်ကြီး အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်မယူမှီအထိ၊ တွဲဖက်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီး ဦးမြင့်ဆွေဟာ၊ (၁၉၉၀) ခုနှစ်မှာ၊ Department of Technical, Agriculture & Vocational Education စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးနှင့် သက်မွေးပညာဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သို့၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုးအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ပြီး၊ (၁၉၉၁) မှာ အငြိမ်းစားယူခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၉၃) ခုနှစ်အထိ အင်းစိန် G.T.I မှာသင်ကြားပေးတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကတော့၊
(၁)။ Civil Engineering မှာ English, Mathematics, Science I, Science II, Applied Mechanics, Building Materials and constructions, Theory of Structure, Hydraulics, Roads and Bridges, Surveying, Reinforced Concrete, Water Supply and sanitation, Estimating and Specification, Railways and Irrigation, Engineering Drawing, Carpentry နဲ့ Masonry အပါအဝင်၊ အလုပ်ရုံ လက်တွေ့ဘာသာရပ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
(၂)။ Electrical (Electronics & Communication) မှာ English, Mathematics, Science I, Science II, Applied Mechanics, Basic Electricity & Electronics, Electronic Circuit Theory, Electronic Measurements & Measuring Instruments, DC Machines & Controls, AC Machines & Controls, Strength of Materials, Electro-Technology, Radio communication, Line Communication, Integrated Electronics, Industrial Electronics, Engineering Drawing အပါအဝင်၊ Electrcal, Electronic, Industrial စတဲ့၊ အလုပ်ရုံလက်တွေ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့ Radio Communication & Morse Code လက်တွေ့ဘာသာရပ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
(၃)။ Electrical (Power) မှာ English, Mathematics, Science I, Science II, Applied Mechanics, Basic Electricity & Electronics, Electrical Measurements & Measuring Instruments, Strength of Materials, Electro-Technology, Electrical Estimating, Transmission & Distribution, Power wiring & Installation, Hydraulics, Electrical Machines & Control, Engineering Drawing နဲ့ Electrical, Electronics, Machine Control & House Wiring, Motor, Generator Appliances & Control စတဲ့၊ အလုပ်ရုံလက်တွေ့ ဘာသာရပ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
(၄)။ Mechanical (Power) မှာ English, Mathematics, Science I, Science II, Applied Mechanics, Work Shop Technology, Strength of Materials, Electro-Technology, Hydraulics, Heat Engines & Thermodynamics, Automotive Technology, Automotive Electricity, Petrol Engines, Diesel Engines, Refrigeration & Airconditioning, Theory of Machines, Engineering Drawing နဲ့ Welding, Machines, Fitting & Blacksmith, Electrical & Petrol Engines, Diesel Engines, Air Cond', Automotive Technology & Electricity စတဲ့ အလုပ်ရုံလက်တွေ့ ဘာသာရပ်တွေဖြစ်ကြပါ တယ်။
(၅)။ Mechanical (Machine Tools & Design) မှာ English, Mathematics, Science I, Science II, Applied Mechanics, Work Shop Technology, Strength of Materials, Electro-Technology, Hydraulics, Heat Engines & Thermodynamics, Theory of Machines, Metallurgy, Production Technology, Estimating & Work Shop Management, Strength of Materials & Testing Laboratory, Engineering Drawing, Machine Drawing & Design နဲ့ Welding & Machines, Machine, Foundry & Pattern စတဲ့၊ အလုပ်ရုံလက်တွေ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
တော်လှန်ရေးအစိုးရလက်ထက်နဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရလက်ထက် (၁၉၇၂) ခုနှစ်အထိ၊ Boys Army ခေါါ တပ်မတော်မှ သင့်လျှော်သူများကို၊ အင်းစိန် G.T.I မှာ၊ သင်တန်းတက်စေခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၉၀) ခုနှစ်မှာ၊ ဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေ ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အခါ၊ ဆရာကြီးဦးညွန့်မောင်မှ တာဝန်ယူကာ၊ (၁၉၉၁ ခုနှစ်) မှာတော့၊ ဆရာကြီးဦးသိန်းဇံ သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးသိန်းဇံ လက်ထက်၊ (၁၉၉၃) ခုနှစ်မှာ Food & Chemical Technology အစားအသောက်နှင့် ဓါတုနည်းပညာ အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းနဲ့ Plastic & Rubber Technology ပလတ်စတစ်နှင့် ရာဘာနည်းပညာ အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း တို့ကို၊ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ပထမဆုံးဌာနမှူးများကတော့ ဆရာမကြီးဒေါါခင်ဝင်း ကြည် နဲ့ ဆရာမကြီးဒေါါတိုးတိုးသန်း တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆရာမကြီးဒေါါခင်ဝင်းကြည် ဟာ၊ ပထမဆုံး မြန်မာလူမျိုးကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူ၊ ဆရာကြီးဦးဘလှီရဲ့မြေးဖြစ်ပါတယ်။
(၁၉၉၃) ခုနှစ်မှာ၊၊ ဆရာကြီးဦးသိန်းဇံ စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးနှင့် သက်မွေးပညာဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) သို့၊ ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အခါ၊ (၁၉၉၅) ခုနှစ်အထိ ဆရာကြီးဦးအောင်ဝင်း မှလွှဲပြောင်းတာဝန်ယူခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ၊ ဆရာကြီး ဦးမြင့်အောင် မှ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်၊ ဆက်လက် တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးသိန်းဇံဟာ အမျိုးသားညီလာခံမှာလည်း၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉၉၄) ခုနှစ်၊ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သူများဟာ၊ (၁၉၉၅ - ၉၆) ပညာ သင်နှစ်မှာ၊ ဒုတိယနှစ် သင်တန်းတွေကို၊ သံလျှင် GTI သို့ ပြောင်းရွှေ့သင်ယူခဲ့ပြီး၊ (၁၉၉၈) ခုနှစ်မှာ သင်တန်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ခဲ့ တာမို့၊ အင်းစိန် GTI ရဲ့နောက်ဆုံး အသုတ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
(၁၈၉၅) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး စက်မှုအတတ်ပညာများ သင်ကြားပေးရာ၊ အင်းစိန် GTI ဟာ (၁၉၉၅) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ၊ သက်တမ်းအရနှစ် (၁၀၀) ပြည့်ခဲ့ ပါတယ်။ နှစ် (၁၀၀) ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်၊ သံဃာတော်အပါး (၁၀၀) ကို ပင့်ဖိတ်ကာ ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း၊ ကျောင်းရှေ့မှာ၊ နှစ် (၁၀၀) ပြည့်ထိမ်းအမှတ်ကမ္မည်းကျောက်စာတိုင်စိုက်ထူခြင်းနဲ့ နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် မဂ္ဓဇင်းထုတ်ဝေခြင်းတို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၇) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၆) ရက်နေ့မှာ (၄၁ ဒသမ ၉၉၇ ဧက) အကျယ်အဝန်းရှိတဲ့၊ အင်းစိန် GTI ကျောင်းကြီးကို၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လွဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုးကားကူယူဖော်ပြခြင်း။ (၁၂)ကြိမ်မြောက် ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲအမှတ်တရ "ဂျီတီအိုင် ပုံရိပ်သမိုင်းမှတ်တမ်းများ" စာအုပ်၊ (၂၀၀၇) ခုနှစ်။
Posted by ကိုထွန်း at 03:262comments:
MATERIAL SCIENCE FUNDAMENTALS HANDBOOK Volume 1 နဲ့ Volume 2
"MATERIAL SCIENCE FUNDAMENTALS HANDBOOK Volume 1 နဲ့ Volume 2" တို့ကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ U.S. Department of Energy, Washington, က ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေဖြစ်ပြီး၊ Volume 1 ကို ဒီနေရာမှ ရယူနိုင်သလို၊ Volume2ကို ဒီနေရာမှ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Credit to : Red-dragon
Posted by ဒူဒူကြီး at 23:11 No comments:
ဒီစာအုပ်ကတော့ "STEAM POWER PLANTS" ဆိုတဲ့၊ US Department of Defense ကထုတ်တဲ့၊ စာအုပ်ပါ။ ဒီနေရာ ကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 23:02 No comments:
ဒီစာအုပ်ကတော့ "BASIC HYDRAULIC SYSTEMS AND COMPONENTS" ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ US Army Aviation Logistics School, Fort Eustis, Virginia ကထုတ်တဲ့၊ စာအုပ်ပါ။ ဒီနေရာ ကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 22:48 No comments:
"GEAROLOGY "ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာ ကနေ ယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 22:39 No comments:
ဒီစာအုပ် ကတော့ "Sensor Technology Handbook" ဆိုတဲ့၊ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Jon S. Wilson တည်းဖြတ်ပြီး၊ Elsevier’s Science & Technology Rights Department in Oxford, UK ကထုတ်တဲ့၊ စာအုပ်ပါ။
Credit to : ကိုရန်ပြေ
Posted by ဒူဒူကြီး at 18:16 No comments:
Posted by ဒူဒူကြီး at 18:02 No comments:
Posted by ဒူဒူကြီး at 03:28 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 21:53 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 05:17 No comments:
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့မှာ Myanmar Maritime Reunion ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး၊ Myanmar Maritime Association (Singapore) ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း၊ ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာ၊ ရေယာဉ် ဗိသုကာ၊ ရေယာဉ်ပြင်ဆင်ရေး၊ ရေကြောင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှု အစရှိ တဲ့၊ ရေကြောင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့သူ မှန်သမျှ၊ တဦးနဲ့တဦးအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ Myanmar Maritime Association (Singapore) ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကို စတင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by ဒူဒူကြီး at 00:27 No comments:
Welding process ဆိုတာ ဂဟေဆက်ခြင်း ပါတဲ့။ ဂဟေဆက်ခြင်း ဆိုတာကတော့ သင့်တော်တဲ့ သတ္တုအမျိုးအစား၊ အပူချိန်၊ ဖိအား စသည်တို့ပေါ် မူတည်၍ သတ္တုနှစ်ခုကို တခုထည်းဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်ပေးသောနည်းစဉ်ပါတဲ့။ ဂဟေဆက်ခြင်း ဆိုတဲ့၊ ဝေါဟာရကို သတ္တု ဆိုတဲ့ သံဖြစ်စေ၊ သံမဟုတ်သော အခြားသတ္တုတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ တခုနဲ့တခုဆက်ခြင်းလို့သုံးသလို၊ ပလတ်စတစ်တွေကို ပလတ်စတစ်ဂဟေချောင်းကို သုံးကာဆက်ခြင်းဟာလည်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်း ဆိုတဲ့ Welding process ပါပဲတဲ့။
ဂဟေဆက်တဲ့အခါ၊ ဆက်မယ့် သတ္တုနှစ်ခုကို အရည်ပျော်စေပြီး၊ fillar metal အဖြည့်ခံသတ္တုတစ်ခုနဲ့ တွဲဆက်ပါသတဲ့။ fillar metal ကိုမသုံးဘဲ၊ ဆက်မည့်သတ္တုနှစ်ခုကို၊ ဖိအားပေးအပူထွက်စေပြီး၊ တွဲဆက်တဲ့ နည်းလည်းရှိပါတယ်။ သံကို ဂဟေဆက်တဲ့အခါ welding လို့ခေါါ ပြီး၊ ကြေးတို့ ခဲ တို့ကို၊ ဂဟေဆက်တဲ့ အခါ brazing, soldering စသဖြင့်ခေါါပါတယ်။
၁၉ ရာစုနှစ်ကုန်ပိုင်းများလောက်ထိ forged welding ကိုသာ အသုံးများပါသတဲ့။ forged welding ဆိုတာ ကတော့၊ ပန်းဘဲဖိုမှာ၊ သတ္တုချောင်းတွေကို၊ နီရဲလာအောင် အပူပေးပြီး၊ အလွန်ပူနေချိန်မှာ၊ တူနှင့် ထူကာ ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသတဲ့။ ၁၉ ရာစုနှစ်ကုန်မှာတော့ Arc Welding နဲ့ Oxyfuel Welding တွေကို စသုံးလာ ပြီး၊ မကြာခင်မှာ Electric Resistance Welding ကို၊ တီထွင်သုံးစွဲခဲ့ကြပါသတဲ့။ ပထမကမ္ဘာစစ်နှင့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးက ဂဟေဆက် အတတ်ပညာကို တစ်ဟုန်ထိုး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့၊ တွန်းအားဖြစ်ခဲ့ပါသတဲ့။ စစ်ကြီးအတွင်းမှာ၊ အဆောက်အအုံတွေ၊ လမ်းတွေ၊ တံတားတွေမြနမြန်ဆောက်ဖို့၊ ဈေးသက်သာပြီး၊ စိတ်ချရတဲ့ ဂဟေဆက် နည်းတွေကို၊ တီထွင်သုံးစွဲခဲ့သလို၊ စစ်ကြီးပြီးတဲ့ အခါ၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက်၊ ဂဟေဆက်ခြင်းဟာ အရေးတကြီးလိုအပ်ရာက တဆင့် တိုးတက်ခဲ့ပါသတဲ့။
Fig. Standard weld symbol AWS A 2.4 - 1998
Fig. Weld joint symbol
အဲဒီကတဆင့် Shielded Metal Arc Welding, Semi-Automatic နဲ့ Automatic welding, submerged arc welding, flux-cored arc welding နဲ့ electroslag welding နည်းဗညာတွေ တိုးတက်ဖြစ်ပေါါ လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ laser beam welding, electron beam welding, electromagnetic pulse welding နဲ့ friction stir welding စတဲ့၊ နည်းပညာတွေနဲ့ အတူ robot welding အထိတိုးတက်ဖြစ်ပေါဲါ့ ပါသတဲ့။ Welding Processes လို့ခေါါတဲ့ ဂဟေဆက်နည်းစဉ် အများအပြားရှိပြီး၊ အတိုကောက်၊ အသုံးအနှုံးတွေနဲ့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
Fig. Welding process
Arc Welding ဟာ၊ အပူကို တစ်နေရာထဲမှာ စုစည်းရစေပြီး၊ penetration ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂဟေဆော်နှုံးမြန်တဲ့အတွက်၊ စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်ပါသတဲ့။ Gas Welding ကတော့ မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေ ကိုပါ၊ ပူစေလို့ heat distortion ကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ Arc Welding တွေကတော့ Electric arc welding, Carbon arc welding, TIG welding, MIG welding, Submerged arc welding, Shielded metal arc welding, Plasma arc welding, Flux cored arc welding, Stud arc welding နဲ့ Electro slag weldingတို့ဖြစ်ပါတယ်။
Gas Welding အတွက်သုံးလေ့ရှိတဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေကတော့၊ oxygen, Acetylene နဲ့ methylacetylene propadiene တို့ဖြစ်ပြီး၊ အသုံးများတဲ့ Gas Welding တွေကတော့၊ Air acetylene welding, Oxy-acetylene welding, Oxy-hydrogen welding နဲ့ Pressure gas welding တို့ဖြစ်ပါသတဲ့။
ဒါ့အပြင် Resistance welding, Solid state welding, Radiant energy welding နဲ့ Thermo-chemical welding ဆိုတဲ့ welding process တွေလည်းရှိပါသေးသတဲ့။ Spot welding, Seam welding, Percussion welding, High frequency welding, Projection welding, Resistance butt welding နဲ့ Flash butt welding တို့ဟာ Resistance welding တွေ ဖြစ်ပြီး၊ Friction welding, Cold welding, Ultrasonic welding, Hot pressure welding, Diffusion welding, Forge welding နဲ့ Explosive welding တို့ကတော့ Solid state welding တွေဖြစ်ပါတယ်။
Radiant energy welding တွေကတော့၊ Laser beam welding နဲ့ Electron beam welding တို့ဖြစ် ပါတယ်။ Thermit welding နဲ့ Atomic welding တို့ကို၊ Thermo-chemical welding အဖြစ် သတ်မှတ် နိုင်ပြီး၊ Brazing နဲ့ Soldering တို့ကိုပါ၊ welding process ထဲမှာ၊ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပါတယ်။
electrical spark တခုကိုဖန်တည်းပြီး၊ အရည်ပျော်စေကာ တွဲဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ closed circuit တခုကိုဖန်တီးပြီး၊ သေးငယ်တဲ့ gap ကလေးတခုကို ချန်ထားတဲ့အခါ၊ current flows ဟာ electric spark အနေနဲ့ စီးဆင်းပါတယ်။ spark ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ temperature ဟာ 3400 ~ 4000 deg. C ခန့်ရှိ ပါတယ်။
Fig. Electric arc welding
electric arc welding - ဆိုတာကတော့ electrode လို့ခေါါတဲ့ arc welding rod ကနေ၊ heat ကိုရတာဖြစ်ပြီး၊ electric arc ဟာ consumable electrode နဲ့ work piece တို့အကြားမှာဖြစ်ပေါါပါသတဲ့။ current ဟာ consumable electrode က တဆင့်စီးတာ ဖြစ်သလို၊ consumable electrode ဟာ heat ကြောင့်အရည်ပျော်တဲ့အခါ၊ work piece အပေါါမှာ fillet deposited အလွှာတခု အဖြစ်ကျန်ခဲ့ပြီး၊ slag ချော်လို့ခေါါပါတယ်။ ဝရိန်ဆော်ပြီး၊ အေးသွားတဲ့အခါ ချော်တွေကို chipping ဒါမှမဟုတ် grinding လုပ်ကာဖယ်ထုတ်ရ ပါသတဲ့။
Fig. Carbon steel arc welding electrode
ဝရိန်ချောင်းဆိုတဲ့ electric arc welding အတွက်သုံးတဲ့ electrode တွေဟာ၊ flux coated electrode တွေဖြစ်ပြီး၊ bar electrode လို့လည်းခေါါပါတယ်။ welding electrodes တွေဟာ၊ electric current ဖြတ်သန်း စီးဆင်းရာ conductors တွေဖြစ်သလို၊ welding process အတွင်းမှာ၊ joints တွေကို၊ အသားဖြည့်ပေးမယ့် filler metal လည်းဖြစ်ပါတယ်။ coated flux ဟာ welding process အတွင်း oxidation ကြောင့်၊ ပေါါပေါက်လာမယ့် oxide forming တွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင်၊ electrode နဲ့ work piece အကြားပေါါပေါက်လာတဲ့ arc ကိုလည်း၊ stabilize ဖြစ်စေပါတယ်။
electrode coating အနေနဲ့ materials အမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို၊ ရောစပ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ Vanadium, Chromium နဲ့ Nickel materials တွေကို coating အနေနဲ့၊ အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ weld strength ပိုကောင်းပါသတဲ့။ ဒါ့အပြင် Sodium Oxides, Calcium Oxides နဲ့ Magnesium Silicate တို့ကို Arc improving materials တွေ အဖြစ် coating အနေနဲ့၊ အသုံးပြုသလို၊ Asbestos, Sodium Silicate နဲ့ Potassium Silicate တို့ကိုလည်း၊ Binding materials အနေနဲ့ ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ Paper pulp နဲ့ cotton တွေကတော့ gas producing agent တွေဖြစ်ပြီး၊ Silicates နဲ့ manganese တို့ဟာ slag production materials တွေဖြစ်ပါတယ်။ Silicon, Aluminum နဲ့ manganese တို့ကတော့၊ de-oxides materials ဆိုတဲ့၊ Fluxing materials တွေဖြစ်ပါသတဲ့။
metals သတ္တုတွေကို၊ atmosphere air မှာ အပူပေးအရည်ပျော်စေပြီး၊ တွဲဆက်တဲ့အခါ၊ oxygen နဲ့ လေကြောင့် oxide formation တွေဖြစ်ပေါါပြီးမှ၊ joint တွဲဆက်ပါသတဲ့။ အဲဒီ oxide formation ဟာ၊ welding strength ကိုကျစေပါတယ်။ ဒီအတွက် welding flux ကို welded area မှာထည့်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ welding flux နဲ့အတူ အပူပေးအရည်ပျော်သွားတဲ့၊ molten metal ဟာရောစပ်သွားသလို၊ oxide formation ကိုပါဖယ်ရှားပေး ပါတယ်။ ferrous metal သံပါတဲ့ သတ္တုတွေကို၊ တွဲဆက်တဲ့အခါ၊ borax, sodium silicate, sodium carbonate နဲ့ sodium bicarbonate welding flux တွေကိုသုံးပါ သတဲ့။ borax ဟာ iron oxide အနေနဲ့ပေါင်းစပ် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး၊ carbonates တွေပါတဲ့ flux ကတော့ cleanser အနေနဲ့ oxide formation ကိုဖယ်ထုတ်ပေးသလို၊ အပူပေး တဲ့အခါ၊ molten metal ရဲ့ fluidity အရည်ပျော်နှူံး ကို မြန်စေပါတယ်။
copper နဲ့ copper alloy သတ္တုစပ်တွေကို၊ welding ဆော်တဲ့အခါ၊ cuprous oxide တွေဖြစ်ပေါါတဲ့ အတွက်၊ sodium, potassium borates, carbonates, chlorides, sulphates နဲ့ boric acid တို့ mixture ရောစပ်ထားတဲ့ welding flux ကိုအသုံးပြုပါသတဲ့။ aluminum နဲ့ aluminum alloy တွေကို၊ welding ဆော်တဲ့အခါ၊ aluminum oxide ဖြစ်တဲ့၊ alumina တွေ oxide formation လာပါတယ်။ alumina ဟာ အလွယ်တကူဖြစ်ပေါါပြီး၊ melting temperature အနေနဲ့ 2000 deg. C ခန့်ရှိတဲ့အတွက်၊ alkaline fluorides, chlorides နဲ့ bisulphates တို့ပါဝင်တဲ့၊ welding flux ကို သုံးပြီး ဖယ်ရှားရပါသတဲ့။
oxide formation တွေကို၊ ဖယ်ရှားဖို့အသုံးပြုတဲ့ fluxes တွေကိုလည်း၊ welding joints တွေအပေါါမှာ၊ မကျန်ဖို့ ဖယ်ရှားရပါတယ်။ fluxes တွေဟာ chemically effective ဖြစ်ပေမယ့်၊ welding joints တွေကို corrosion ဖြစ်စေ ပါတယ်။ fluxes တွေကို steam ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးနဲ့ ဆေးကျောခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားနိုင် ပါတယ်။
Carbon arc welding - carbon rod ကို electrode အနေနဲ့သုံးပြီး၊ single carbon process နဲ့ twin carbon process ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။ carbon arc welding မှာ DC ကိုသုံးပါတယ်။ twin carbon process မှာ electrically independent torch ကိုသုံးပါသတဲ့။
Fig. Carbon arc welding
heat ဟာ work piece လို့ခေါါတဲ့ base metal နဲ့ electrodes တို့အကြားမှာဖြစ်ပေါါပြီး၊ base metal က welding joints မှာ အသားဖြည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ၊ fillar metal ကိုသုံးပြီး၊ ဖြည့်ပါတယ်။
TIG welding - ဆိုတာကတော့ Tungsten Inert Gas welding ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ electric arc welding မှာ oxidation ကြောင့် formation တွေဖြစ်ပေါါရပြီး၊ welding joints တွေရဲ့ strength ကိုကျစေပါတယ်။ ဒီအတွက့် flux coated electrodes တွေသုံးရပေမယ့် TIG welding မှာ၊ weld zone ကို Inert Gas နဲ့ ကာပြီး တွဲဆက်တဲ့ အတွက်၊ atmosphere မှ oxygen နဲ့ nitrogen တို့နဲ့၊ ထိတွေ့မှုမရှိတော့ flex coated rods တွေကိုသုံးဖို့မလိုတော့ပါဘူး။
Fig. TIG welding
tungsten ကို electrode အနေနဲ့ သုံးပြီး၊ tungsten နဲ့ work piece ကြားမှာ arc ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ joint အနေနဲ့ တွဲဆက်တာ ဖြစ်သလို၊ tungsten ဟာ၊ flex coated electrodes တွေလို၊ welding ဆော် ရင်း၊ ပျော်သွားမယ့် consumable electrode မဟုတ်ပဲ၊ non-consumable electrode ဖြစ်ပါတယ်။ တွဲဆက်မယ့်၊ material အမျိုးအစားအရ AC သို့မဟုတ် DC ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ copper နဲ့ copper alloy တွေကို၊ DC straight polarity အသုံးပြုပြီး၊ welding ဆော်ပါတယ်။ stainless steel နဲ့ magnesium ကိုတော့၊ reverse polarity သုံးပြီး၊ steel, cast iron နဲ့ aluminum တို့ကို AC သုံးကာ၊ welding ဆော်ပါသတဲ့။ တခါတလေ magnesium ကို AC သုံးကာ welding ဆော်လေ့ရှိပါတယ်။
welding joints မှာ အသားဖြည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါ၊ fillar metal ကိုသုံးပြီး၊ ဖြည့်ပါတယ်။ TIG welding ကို thin cross-section metals ပါးလွှာတဲ့ သံပြားတွေကိုဆက်ဖို့အတွက်၊ သုံးပါသတဲ့။ ဒါ့အပြင် manual အနေနဲ့ welding ဆော်သလို၊ automatic controlling system တွေကိုသုံးပြီးတော့လည်း၊ welding ဆော်နိုင်ပါတယ်။ continuous, spot နဲ့ intermittent weld joints တွေ အနေနဲ့၊ တွဲဆက်နိုင်သလို၊ lead နဲ့ zinc alloy တွေရဲ့ melting point temperature ဟာနိမ့်တဲ့အပြင်၊ vaporized ဖြစ်ပြီး၊ electrode ကို dull ညစ်ပေကာပိတ်စေတဲ့အတွက်၊ lead ခဲနဲ့ zinc သွပ်သတ္တုစပ်တွေကလွဲလို့၊ ကျန်တဲ့ alloy သတ္တစပ်တွေအားလုံးအတွက်၊ TIG welding ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ copper alloys, aluminum alloys, magnesium alloys, nickel alloys, zirconium alloys, beryllium alloys, titanium alloys, carbon steels, alloy steels, stainless steels နဲ့ refractory metals တွေကို၊ တွဲဆက်တဲ့အခါ TIG welding ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
Inert gas အဖြစ်၊ colour အရောင်အဆင်းနဲ့ odor less အနံ့မရှိတဲ့ Helium နဲ့ Argon ဓါတ်ငွေ့တွေကို သုံးပါသတဲ့။ Helium ဟာ atomic weight အနေနဲ့4သာရှိလို့ ပေါ့ပါးတဲ့ light gas ရယ်လို့သတ်မှတ်နိုင် သလို၊ melting temperature substance အနေနဲ့ – 272 deg. C မှာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ melting temperature နိမ့်တဲ့အတွက်၊ weld temperature ဟာနိမ့်ပြီး၊ welding process အတွင်းမှာ၊ ပေါါပေါက် လာမယ့် work piece ရဲ့ distortion ကိုလျှော့ချနိုင်သလို၊ penetration ကိုလည်း ပိုကောင်းစေပါတယ်။ အရမ်းပေါ့တဲ့ lightness properties ဖြစ်တဲ့ အတွက်၊ အလွယ်တကူလွင့်ပျောက်သွားနိုင်ပြီး၊ welded zone မှာ oxidation ကြောင့် formation တွေဖြစ်တာကိုတားဆီးဖို့၊ shielded အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ Helium gas ကိုပမာဏအများအပြား၊ အသုံးပြုရပါတယ်။
Argon ကတော့၊ atomic weight အနေနဲ့ 39.94 ရှိပြီး၊ melting point အနေနဲ့ –188 deg. C ရှိတဲ့ အတွက်၊ density အနေနဲ့ Helium ထက်၊ ဆယ်ဆလောက်ပိုပါသတဲ့။ Argon ကို လေထုထဲ ကနေ၊ liquefied ရယူနိုင်ပြီး၊ distilled လုပ်ကာထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် electrical properties အနေနဲ့  ကြည့် ရင်၊ lower ionization voltage ကိုထုတ်ပေးတဲ့အတွက်၊ alternating current AC ကိုသုံးပြီး၊ welding ဆော်တဲ့အခါ၊ stable arc ကိုနိုင်ရပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက် TIG welding မှာ inert gas အနေနဲ့ Argon ကိုပိုအသုံးပြုပါသတဲ့။
Reference and Image Credit to : http://www.typesofwelding.net
Posted by ဒူဒူကြီး at 07:28 No comments: